ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရှိနေသော ကြွက်များအားတိုက်ခိုက်ရန် စက်ရုပ်ကြွက်အား တိုကျိုသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့မှ တီထွင်လိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရှိနေသော ကြွက်များအားတိုက်ခိုက်ရန် စက်ရုပ်ကြွက်အား တိုကျိုသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့မှ တီထွင်လိုက်ခြင်း
ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်းရှိနေသော ကြွက်များအားတိုက်ခိုက်ရန် စက်ရုပ်ကြွက်အား တိုကျိုသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့မှ တီထွင်လိုက်ခြင်း
Posted by Mr WorldWide on Feb 25, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources |2comments
တိုကျိုနိုင်ငံ ၀ါဒီဒါတက္ကသိုလ်ရှိ သုတေသနပညာရှင်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းထဲသို့ ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်နေသော ကြွက်များအား ပြန်လည်နှိမ်နှင်းရန်အတွက် စက်ရုပ်ကြွက်တစ်မျိုးကို တီထွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၄ စင်တီမီတာရှည်သော WR-3 စက်ရုပ်ကြွက်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းထဲသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်သော ကြွက်များကို နှိမ်နှင်းရန် ပြုလုပ်ထားသော စက်ရုပ်တိုက်ခိုက်ရေးကြွက်ဖြစ်ပါသည်။
စက်ရုပ်၏ ဘီးများအား ကြွက်တစ်ကောင်၏ ရွေ့လျားနေပုံကို အတုယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ စက်ရုပ်ကြွက်အနေဖြင့် လိုက်ဖမ်းခြင်း၊ လိုက်လံတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းစသည့် အပြုအမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လိုက်ဖမ်းခြင်းအဆင့်တွင် WR-3 သည် ရန်သူ့ကြွက်၏ အနီးတွင် တစ်ချိန်လုံး လိုက်လံနှောင့်ယှက်ပြီး ၄င်းအားမထိခိုက်ဘဲ ထိတ်လန့်နေစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုက်လံ တိုက်ခိုက်ခြင်းအပိုင်းတွင် စက်ရုပ်ကြွက်သည် ရန်သူ့ကြွက်၏ အနားတွင် ရှိနေပြီး ၄င်းအားထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွင် အခြားကြွက်အား တစ်ကြိမ်လျှင် ၅ စက္ကန့်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ပါသည်။ ရန်သူ့ကြွက်၏ တည်နေရောအား ပုံရိပ်စနစ်ဖြင့် ထောက်လှမ်းခြေရာခံပါသည်။
ဟီရိုယူကီ အီရှိ ဦးဆောင်းသော အဖွဲ့သည် အသက်အ၇ွယ်အမျိုးမျိုးရှိ ကြွက်များဖြင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များအရ လိုက်လံတိုက်ခိုက်မှုနှင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ကြွက်များအပေါ်၌ ကွဲပြားသော သက်ရောက်မှု ရှိပါသည်။
တိရစ္ဆာန်များ၏ အသွင်သဏ္ဍာန်နှင့် လှုပ်ရှားမှုအား တုပပြုလုပ်ခြင်းသည် ပထမအကြိမ်မဟုတ်ဘဲသေးငယ်သော မိုဘိုင်းစက်ရုပ်များဖြစ်သည့် ပိုးမွှားများ၊ ဌက်များ၊ ငါးများနှင့် ကိုက်ဖြက်တက်သော သတ္တ၀ါတွင်လည်း အသုံးပြုခဲ့ပီး ဖြစ်ပါသည်။
Tokyo team designs violent robot rat to bully live lab rats
Researchers at the Waseda University in Tokyo have developedarobotic rat that aggressively attacks living lab rats in order to make them depressed.
Depressed rats are used to test new drugs designed to treat depression. There areanumber of ways to turn regular rats into depressed rats — these include making them swim for extended periods and giving them electric shocks. These techniques generally tend to makes the rats unhappy, at which point researchers can dose them with antidepressants.
The problem with these approaches is that human depression generally isn’t triggered by electric shocks or being forced to swim for hours.
ကြွက်နှိမ်နင်းတဲ့ ကိရိယာတွေကို ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း တီထွင်ထားကြတာ
ကြာပေါ့…. ကြွက်ညှပ်တို့ … အခြားနည်းလမ်းက ကြွက်နှိမ်နင်းဖို့ ကြောင်တို့မွေးထားကြတယ်
စက်ရုပ်လေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတဖြစ်ရပါတယ်…………..
ဒါနဲ့ အိမ်မှာကြွက်ပေါးလို့ ကြောင်မွေးထားမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကြောင်ကို ဘာအစာမှမကျွေးရဘူးတဲ့ဗျ။
ဒါမှကြောင်က ဗိုက်ဆာပြီး ကြွက်ခုတ်တာတဲ့…………….
ကြွက် ကိုကြောက်လို့ ကြောင်မွေးတော့ ကြောင်သေး ကြောင်ချေးနံ့ က ဒုက္ခပေးပြန် ။
ကြောင်မမွေးပြန်တော့ ကြွက်ကပ်ကော်၊ ကြွက်ထောင်ချောက်၊ အဆိပ်ကျွေး ကိစ္စ လုပ်ရပြန် ၊
သူတပါးအသက် သတ်ရတယ် ဆိုတော့ မကောင်းဘူးဖြစ်ရပြန် ၊